Kedu ngwaahịa ndị kachasị ọnụ na-ere n'ịntanetị? | ECommerce ozi ọma
Kedu ngwaahịa ndị kachasị ọnụ na-ere n'ịntanetị?
E nwere ọtụtụ ngwaahịa nwere oke oke ọnụ ahịa akụ na ụba na ahịa, dịka ụgbọ ala, ihe onwunwe nke akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ndị ama ama, mkpokọta dịka baseball cards ma ọ bụ ụsụ ndị a ma ama na-eme egwuregwu dị ka Babe Ruth, n'isiokwu na-esonụ anyị ga-agwa gị nke bụ ngwaahịa ndị kachasị ọnụ ahịa azụrụ na a E-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ.
1 Albert, Texas.
2 Gulfstream nke Abụọ
4 Atlas F Isi Ala
Ọ nwere ike ịdị ka ihe ọchị, mana otu n'ime isiokwu ma ọ bụ nke a ala kachasị ọnụ ahịa ere na saịtị ntanetị Ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụ ihe na-erughị otu obodo, e rere obodo Albert, Texas nke dị na mba United States na ebay maka 2.5 nde dollar, e rere nke a na 2002 ma nwee onu ogugu nke 5 bi. Mgbe emezigharị ya, ọ nwere ụlọ ezumike-ụlọ ebe ndị bi na 25 ugbu a nwere ike ịme onwe ha obi ụtọ.
Gulfstream nke Abụọ
Ngwaahịa a bụ jet onwe nke a na-ere na ntanetị na 2001 maka ọnụahịa dị elu nke 4.9 nde dolla, Onye na-ere ụgbọelu si Africa zụrụ ma zụrụ ya.
Nke a bụ ngwaahịa kachasị ọnụ ahịa ere na saịtị ebay, nke a ụgbọ mmiri okomoko nwere oke ime ụlọ 10, ime ụlọ ọbịa 8, nnukwu ụlọ sinima, mgbatị ahụ, ọfịs na helipad dị na oche nke a. E rere ụgbọ mmiri a na nnukwu ego nke 140 nde dollar, nzụta ahụ mere na 2005, ruo ugbu a amataghị onye na-emeri mmeri, mana ihe doro anya bụ na ọ ga-abụrịrị onye ama ama si ụwa ego.
Atlas F Isi Ala
Ngwaahịa a bụ ntakịrị ịkwa emo, ọ bụ okpuru ulo mepụtara na 2002 ntakịrị mgbe ihe omume mwute nke Septemba 11, ọ bụ n'okpuruala wụsịrị Ihe akaebe nke mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, a gbanwere bonka a n'ime ụlọ okomoko dị n'okpuru ala nke nwere ntụrụndụ niile iji lanarị mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, e rere ya $ 2.1 na otu afọ nke mmepe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ngwaahịa ndị kachasị ọnụ na-ere n'ịntanetị?
Kedu ihe ndị m nwere ike ịre n'ịntanetị?
Ndị na-emetụta ya, atụmatụ ahịa nke oge a